Football Khabar » भेनेज्वेलाविरुद्ध खेल्ने अर्जेन्टिनाको प्लेइङ–११ सार्वजनिक, को–को परे ?
भेनेज्वेलाविरुद्ध खेल्ने अर्जेन्टिनाको प्लेइङ–११ सार्वजनिक, को–को परे ?
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा अबको केहीबेरमा (१२ः४५ बजेबाट) दोस्रो क्वार्टरफाइनल खेलमा अर्जेन्टिना र भेनेज्वेला खेल्दैछन् । सो खेलका लागि लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनाको सुरुआती–११ सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक सुरुआती टिममा कप्तान लिओनल मेस्सी पर्दा केही प्रमुख खेलाडीलाई बेन्चमा राखिएको छ । जसमा गोल पोस्ट अर्मानीले सम्हाल्नेछन् भने रक्षापंक्तिमा ओटामेन्डीसहितका खेलाडीको साथ हुनेछ ।
यता, आक्रमण लाइनमा कप्तान मेस्सीलाई सर्जियो अगुइरो र मार्टिन्जले सघाउनेछन् । यस खेलमा एन्जल डि मारिया र पाउलो डिबालालाई पनि बेन्चमै राखिएको छ । यसअघि समूह चरणको अन्तिम खेलमा कतारविरुद्ध खेलको ७६औं मिनेटमा मैदान छिरेका उनले ६ मिनेटमै असिस्ट गरेका थिए । कोपामा उनले हालसम्म मात्रै १७ मिनेट खेल्न पाएका छन् ।
सुरुआती टिम :
प्रकाशित मिति १३ असार २०७६, शुक्रबार १८:०३